Kernel 5.7: izvi ndizvo zviri kushandiswa parizvino pane iyi vhezheni | Linux Vakapindwa muropa
Kernel 5.7: izvi ndizvo zviri kushandiswa parizvino pane iyi vhezheni
Linus Torvalds neboka rake rekuvandudza havana kumisa kuyedza kwavo yekuenderera mberi nekuvandudzwa kweLinux Kernel kunyangwe paine matambudziko andinoziva arikuitika parizvino nekuda kweCovid-19
Uye ndizvozvo kunyange Ndinoziva zviri kushanda pakuburitswa kwemumiriri yeshanduro nyowani kubva Kernel 5.6, zvakare yatove kushanda pane inotevera vhezheni 5.7 kuti kana zvese zvikaenderera mberi mukufora tichazviona zvichiburitswa munguva ino yegore
1 Kugadziridzwa kwe nftables
2 NVMe SSD bhutsu zvinowedzera
3 ExFAT faira system mutyairi
Kugadziridzwa kwe nftables
Uye ndizvo izvozvo nezve iyi nyowani vhezheni yeLinux Kernel 5.7 ari vagadziri veiyo kusefa uye kuchinjisa subsystem Netfilter network mapaketi kuziviswa nekutumira seti yezvimedu zvinomhanyisa zvakanyanya kugadziriswa kwe seti hombe dzesimba, izvo zvinoda kuongorora kusanganiswa kwemasnets, network network, protocol, uye MAC kero.
Iwo matinji akatogamuchirwa mubazi reNf-rinotevera, iyo ichave yakarongerwa kuiswa muLinux 5.7 kernel. Kumhanyisa kunozivikanwa zvikuru kwakaitwa nekushandisa mirairo yeAVX2 (zvakaenzana zvakagadziriswa zvichibva pamirayiridzo yeNEON yeARM zvakarongerwa kuburitswa mune ramangwana).
Optimizations vakaunzwa mumo module nft_set_pipapo (PIle PAcket POlicies), iyo inogadzirisa dambudziko rekufananidza zvirimo zvepaketi nematanho emunda mamiriro ematanho anoshandiswa mukusefa mitemo, senge IP uye network port masera (nft_set_rbtree uye nft_set_hash shandisa nguva yekugoverwa uye kuratidzwa kwakananga kwemaitiro).
Vectorized ne2-bit AVX256 mirairo, iyo pipapo vhezheni pane ino sisitimu ine AMD Epyc 7402 processor yakaratidza kuwedzera kwe420% pakuongorora kana uchiongorora marejista makumi matatu aisanganisira mapakeji epoti echikwata.
Iko kuwedzera mukuenzanisa kwemasetnet mapaketi uye nhamba yechiteshi kana uchiongorora zvakapetwa ka1000 zvaive 87% ye IPv4 uye 128% ye IPv6.
Kumwe kugadziridza, uko kunotendera kushandiswa kwema8-bit mepu mapoka panzvimbo pe4-bit iwo, yakaratidzawo kuwedzera kwekuita kwekuwedzera: 66% kana uchiongorora makumi matatu ezviuru zveprotocol zvinyorwa, 30% - IPv43 port subnet uye 4% - IPv61 port subnet.
Pakazara, kutora AVX2 optimizations mukutarisa, kuita kwepipapo kwakawedzera mune izvi bvunzo ne766%, 168%, uye 269%, zvichiteerana.
Hunhu hunowanikwa hwekuenzanisa kwakaomarara vari pamberi pekutarisa yega minda mu rbtree (kunze kweiyo port + protocol inosunga bvunzo), asi kusvika parizvino vanosara kumashure kweakanangana nekutarisa vachishandisa maheshes uye anodonhedza-based processor. Mu netdev.
NVMe SSD bhutsu zvinowedzera
Imwe shanduko inozoperekedza Linux 5.7 Kernel ndeye kusimudzira kukurumidza system boot kubva kuNVMe SSD. Ndizvo kuvonga kune Intel anovandudza Josh Triplett, uyo akataura kuti iyo nguva yakatorwa kuti uone kana iyo nvme boot drive yakagadzirira kushandisa i100ms. Sezvo NVME SSDs inowanzo kumhanyisa kwazvo, Triplett yakachinja iyo timeout kubva pa100 milliseconds kusvika 1 ms.
Sekureva kwemugadziri, izvi zvakawana anenge 0.2 masekondi munguva yekutanga. Kunyangwe izvo zvisingaite musiyano wakakura zvisingaite, iri chokwadi musimboti we 'zvese zvishoma zvinoverengwa'.
Zvakare, iwo 0.2 masekondi anogona kuve akakosha mune kumwe kunyorera, senge chaiwo muchina kumisikidza kana kamera masisitimu ayo anoda kuve akagadzirira kupfura nekukasira ipapo.
ExFAT faira system mutyairi
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, imwe yezvinhu zvitsva zvatinogona kuwana muLinux 5.7 iri itsva exFAT fileystem driver, iyo zvino ichapa rutsigiro rukuru kune mutyairi iye zvino ari muKernel, sezvo vhezheni yazvino iri shoma nekuti yakavakirwa pane mutyairi wekare.
Mutungamiriri mutsva uyo anozobatanidzwa achave iyo Samsung yanga ichishanda, zvichiita kuti zvikwanisike kushanda neakakura midhiya akamisikidzwa uchishandisa iyo exFAT faira system. Mutyairi mutsva achazozivikanwa seEXFAT_FS, asi mutyairi wekare wepamberi (CONFIG_STAGING_EXFAT_FS) haazoenda izvozvi. Vatyairi vaviri vachatanga kugara padivi nepadivi, asi izvi hazvizove zvakadaro nariini.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kernel 5.7: izvi ndizvo zviri kushandiswa parizvino pane iyi vhezheni
Iyo yakagadzikana vhezheni yeParrot OS 4.8 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo
Vhura sosi yevhidhiyo musangano wekugadzirisa. Nzira yakanakisa yekutora mukana kwavari